प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायधिससंग के सल्लाह गरे ? राष्ट्रपतिबाट संसद बिघटन गर्नुमा कसको हात ? ~ Canadanepal.net
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायधिससंग के सल्लाह गरे ? राष्ट्रपतिबाट संसद बिघटन गर्नुमा कसको हात ?
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायधिससंग के सल्लाह गरे ? राष्ट्रपतिबाट संसद बिघटन हतारमा गर्नुमा कसको हात छ ? लोकतन्त्रिक दलहरु एक जुट भए संविधान बाँच्न सक्छ । Guest : डा.रामकृष्ण तिमलसेना, पूर्व रजिष्टार सर्वोच्च अदालत Presenter : Navaraj Chalise